China Silicone mucheche mukombe Kudzidziswa Sippy Mucheche Eco Shamwari l Melikey fekitori uye vanotengesa | Melikey
Vacheche Dinnerware Set
Mukomana Anonwa Mukombe
Silicone Teething Zvigadzirwa
Bracelet / Necklace / Tamba Gym
Woode Teething Zvigadzirwa
Dzidzo Yevana Toys
Mucheche Kudyisa Maseti
Silicone Mucheche Mukombe Kudzidziswa Sippy Mucheche Eco Hushamwari l Melikey
Silicone mwana mukombe unogadzirwa neyakareruka, inoshanduka chikafu giredhi silicone, yakachengeteka zvinhu zvemwana mudiki. Iyo ndeimwe tableware for baby feeding
Mbiri-mu-imwe tudyo & mukombe wemvura: Inouya nemabhodhoro maviri anotsiviwa, ayo anogona kushandiswa sekapu yemashanga kana semudziyo wevacheche. Bvisa muvharo, iri zvakare mukombe unonwa wakavhurika. Rega mwana wako adye uye anwe mhepo!
Kudonha-chiratidzo chemukombe wemwana: Yakagadzirwa neyakareruka uye inoshanduka silicone, haizopwanya kana kutsemuka kana yadonhedzwa pane yakaoma pasi. Yakachengeteka kumwana wako, ndizvo zvakafanira kuti udzidze kudya nekumwa zvakasununguka
Durable babys first cup: Equipped with two grip handles, it is convenient for small hands to grasp, helps to build self-confidence, and promotes the easy transition from bottle to cup. The capacity is 9 oz/250 ml. Suitable for babies over 6 months
Spill-proof snack cup: The snack cover is designed with a soft petal cover, so that the baby can reach into the toddler cup and take the food easily without making a mess.
Chimwe-chidimbu, chiri nyore kuchenesa. Inogona kucheneswa mune yekuwachira ndiro. 100% chikafu giredhi silicone, isina bisphenol A, PVC uye phthalates.
Chigadzirwa Chigadzirwa: Silicone Baby Cup Ine Muvharo
MOQ: 10 pcs pane rumwe ruvara
zvinhu: Chikafu cheGiredhi Silicone
Ruvara: 5 mavara
Yuniti Mutengo: USD 2.5 ~ 2.8
Silicone mucheche mucheche Sippy Kudzidziswa Makapu BPA Mahara Tsika Reusable
Hukuru Melikey silicone yemwana mukombe inokodzera kwazvo vana vadiki, muromo wemwana nemaoko mashoma. Iyo silicone yemwana mukombe nehuswa inokodzera vacheche, ine chinzvimbo che250ml, yakapfava spout. Vana vanogona kubata bata svutugadzike yesilicone kuti vadzidze kunwa makapu pasina kudurura.
Yakachengeteka zvinhu, mucheche mashanga mukombe unosanganisira muvharo, iyo yakapfava mashanga inogadzirwa neyekudya-giredhi silicone, 100% BPA-yemahara, PVC-isina, lead-yemahara, phthalate-isina, hwema-husina uye kemikari-isina, nyoro Silicone nzara. chengetedza mazino emwana wako kana mazino ari kukura. Iti kuonekana nebhakitiriya.
yekupedzisira mikombe yevana pamusika, dhizaini yemwana mukombe ine muvharo inoita kuti zvive nyore kutsemura uye kuchenesa zvakakwana kurwisa muforoma.
Yakareruka kuchenesa uye yakachengeteka kuchengeta, kapu yekudzidza yemucheche yakakodzera kuti ishandiswe mumahowave eovhi uye mafriji, uye inogona kucheneswa nyore nyore mune yekuwachisa kana kushambidzwa nemaoko.
Rinovuza-chiratidzo uye risingaputsike, kana mwana wako akaregedza iyo silicone yemwana yekumwa mukombe, mvura yacho haizobuda kunze kwechivharo.
Mwana mukombe wekudya pamwe nevhavha , ine dhizaini yekuvhura dhizaini, zvinoita kuti zvive nyore kuti mwana atore chikafu.
BPA Yemahara Mucheche Sippy Mukombe nekaviri Ruvara Bata
Chikafu cheGiredhi Silicone
Zviratidzo zvinogona kugadzirwa
Zvinoenderana neoder yako
1. Chikafu chegiredhi: Mukombe wekudzidza usina bisphenol A, isina-chepfu uye isina hwema.
2.Smooth edge: Rutivi rwemukombe wekudzidzira rwakatsetseka, uye yakapfava silicone inodzivirira kukura kwezino remwana.
3. Chimiro chakasimba: Iko mukombe wekudyisa mukombe wakasimba kwazvo. Kwete akaremara. Ergonomic dhizaini, inokodzera maoko mashoma
4. Practical handle: silicone open cup for baby with handle, easy for baby to grasp, not easy to overflow.
silicone mwana mukombe
Silicone Vana Snack Mukombe
Mucheche Mvura Kunwa Mukombe
mwana wekudyisa ndiro yakaiswa
baby dinnerware yakatarwa
Vacheche Kunwa Mukombe Matanho l Melikey
6 MWEDZI GORE REKUDZIDZA Mucheche KUDYA CHIDZIDZO CHEDZIDZO l Melikey
Chikafu Giredhi, Isina-chepfu, BPA Yemahara Mucheche Dinnerware l Melikey
Sippy Cup Age Range l Melikey
Previous: 2021 Yakanaka Hunhu China Kudya BPA Yemahara Mwana Anotakurika Chikafu Chekuchengetedza Mukombe
Next: Yemahara sampuro yeChina Teething Silicone Beads Mucheche
Q1: Ichi chigadzirwa chine chero lead here?
Socub mudiki sippy makapu akagadzirwa nechikafu giredhi silicone, BPA yemahara, tungamira mahara
Q2: Iine gomba remhepo here?
Hongu, ine gomba remhepo rekuti mwana ayamwe zvakanaka.
Q3: Ichi chigadzirwa chinoratidza mamaki ekurumwa kubva kuvana vanotsenga patsanga kana padivi pemukombe?
Hapana maruma ekurumwa. Iyo silicone yakakora asi inochinja
Hazvina akachengeteka. Beads uye teethers vari zvachose akaita pamusoro yepamusoro dzisiri chepfu, zvokudya giredhi BPA vakasununguka silicone, uye anotendwa FDA, AS / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, PRO 65, EN71, EU1935 / 2004. We akaisa yakachengeteka nzvimbo yokutanga.
Well yakagadzirwa. Zvakagadzirirwa kukurudzira mwana iwedzere injini uye unyanzvi kutsinga dzinouya. Baby otora vibrantly mavara zvitarisiko-zvadzinofarira uye anonzwa nayo-yose apo dzekugonesa ruoko-kuti-muromo Kufambisa kuburikidza kutamba. Teethers vari Excellent Training Toys. Anobudirira nokuti kumberi pakati uye shure mazino. Multi-mavara kuti ichi mumwe zvipo zvakanakisisa mwana uye matoyi mucheche. Teether yakaitwa chimwe chezvinhu silicone chikukutu. Zero chocking Muvuti. Nyore kuisa imwe pacifier inoti kupa mwana kukurumidza uye nyore kuwana asi kana voparadzwa Teethers, akachena effortlessly nesipo nemvura.
Rakaiswa pamusoro bvumidzwa. Vari kunyanya yakagadzirwa edu unyanzvi zvakagadzirwa chikwata, uye vakashandisa nokuda bvumidzwa, saka unogona Sale navo pasina njere pfuma nenharo.
Fekitari Wholesale. Tiri mugadziri kubva China, zvakakwana maindasitiri cheni mu China kunoderedza kugadzirwa mutengo uye kunokubatsira kunze mari idzi zvakanaka zvigadzirwa.
Customized mabasa. Customized design, Logo, pasuru, ruvara unobvumirwa. Tine zvakaisvonaka magadzirirwo chikwata uye prodution chikwata kusangana yenyu tsika zvikumbiro. Uye zvinhu zvedu dzakakurumbira muEurope, North America uye Autralia. Vari yakatenderwa zvakawanda vatengi munyika.
Melikey akavimbika kune kudavira kuti rudo kuti upenyu nani vana vedu, kuvabatsira kurarama mavara mupenyu nesu. Zviri kwedu rukudzo kuti vakatenda!
Huizhou Melikey Silicone Product Co. Ltd ari nyanzvi akaigadzira silicone zvigadzirwa. Tinotarisa silicone zvigadzirwa mu houseware, kitchenware, mwana matoyi, makomba, runako, etc.
Hwakagadzwa muna 2016, asati ava kambani, isu kazhinji akaita silicone muforoma nokuda OEM Project.
The yokunyorera chigadzirwa edu 100% BPA silicone akasununguka chikafu kugiredhi. Zvinonzi totallynon-chepfu, uye anotendwa FDA / SGS / LFGB / CE. Inogona nyore kucheneswa nesipo nounyoro kana mvura.
Tiri itsva International zvokutengeserana mubhizimisi, asi tine ruzivo makore anopfuura 10 'mukuita silicone muforoma uye kubudisa silicone zvigadzirwa. Kusvikira 2019, tava rakawedzerwa 3 okutengesa chikwata, 5 anoita diki silicone muchina uye 6 anoita guru silicone muchina.
Tinobhadhara yakakwirira kuteerera unhu silicone zvigadzirwa. Mumwe chigadzirwa achava 3 nguva yakamboita rokuongorora kubudikidza QC wedhipatimendi vasati kurongedza.
okutengesa chikwata chedu, afunge chikwata, yokutengesa chikwata uye zvose nokuunganidza vashandi mutsetse achaita zvatinogona kukutsigira!
Custom hurongwa uye ruvara unobvumirwa. Tine ruzivo pamusoro 10 makore 'mukubudisa silicone teething sechishongo chomuhuro, silicone mwana teether, silicone pacifier pedhi, silicone teething marozari, etc.
kapu yemwana ine mashanga
mucheche anonwa kapu
Mucheche Silicone Mukombe neLid
Mukomana weStraw Cup
mwana wekudzidzira kapu
kapu yekudzidziswa kwemucheche
kapu yemvura yemucheche
China Mwana Mukombe
Yevana Mvura Mukombe
silicone mwana mukombe Wholesale
Silicone Kudzidzisa Mvura Mukombe
sippy makapu mwana
Sippy Kudzidzisa Mukombe
Baby Plates Uye Bowls BPA Mahara Wholesale Chinhu ...
Suction Yechecheche Silicone Bowl Chikafu cheGiredhi l M ...
Baby Spoon And Fork Set Wholesale l Melikey
Baby Dinnerware Plate Sets Munhu zvichienderana Factory ...
Bamboo Mucheche Bowls Tableware Wholesale l Melikey
Silicone Mucheche Placemat Kudya BPA Yemahara l Melieky
Address: 2F, Factory Kuvaka yeAndy Kambani, N.8 Zone, Zhongkai High-tect Zone, Huizhou, Guangdong, China 516000
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,AMP Mobile
silicone teething marozari , silicone mwana teether , rwokuzvarwa teething, teether yakanakisisa 4 wemwedzi , teething nechishongo mwana musikana, silicone teether ,